भारतमा १ अर्ब कोरोना भ्याक्सिन, एसआईआई र एस्ट्राजेनेबीच सम्झौता हुँदै – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/भारतमा १ अर्ब कोरोना भ्याक्सिन, एसआईआई र एस्ट्राजेनेबीच सम्झौता हुँदै
एजेन्सी । आजकल धेरैको मनमा एउटा प्रश्न छ– कोरोना भाइरसको महामारी समाप्त गर्ने भ्याक्सिन कहिले बन्ला ? औषधि कहिले पत्ता लाग्ला ? विभिन्न देशले कोरोनाको सम्भावित भ्याक्सिन तयार गर्दैछन् र यसका लागि परीक्षण भइरहेको छ । यसैक्रममा भारतमा पनि भ्याक्सिन उत्पादनको तयारी हुँदैछ । पुणेस्थित सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया (एसआईआई) स्थित ल्याबमा कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने र आतुर्ति गर्ने तयारी भइरहेको छ ।